Global Voices teny Malagasy · Mey 2013
Mey 2022 43 Lahatsoratra
Tantara misongadina tamin'ny Mey 2013
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana31 Mey 2013
Afrika Atsimo30 Mey 2013
Italia: Ravan'ny Afo Ilay Tranom-Bakoka ‘Città della Scienza’ ao Napla
Eoropa Andrefana24 Mey 2013
Azia Atsinanana 30 Mey 2013
Azia Atsinanana 29 Mey 2013
Niatrika tsikera mamaivay avy amin'ny mpianatra iraisam-pirenena Shinoa ny Filoha Lefitry ny Firenena Amerikana Joe Biden taorian'ny niantsoany an'i Shina ho firenena tsy afaka "mieritreritra zavatra hafa" na "mifoka rivotra malalaka" nandritra ny kabariny fanokafana tao amin'ny Anjerimanontolon'i Pennsylvania.. Saingy namaly bontana ireo Shinoa mpisehatra amin'ny Aterineto, nitsikera ireo mpianatra any ivelany mikasika ny fitondrantenany sy ny fiarovany ny kabarin'i Biden ho mendrika hosaintsainina tsara
Brezila : Nesorin'ny Toby Famokarana Herinaratra Saingy Niverina Eny Amoron-Drano ny Mponina
Amerika Latina 28 Mey 2013
Nafindra toerana any amin'ny tanàna naorina manokana hipetrahany ireo mponina tamoron'ny rano noho ny tsafodrano nateraky ny fanorenana ilay toby famokarana herinaratra Jirau any Amazona Breziliana. Niverina nanamorona ny rano ihany anefa izy ireo satria tsy mety aminy ilay fomba fiaina vaovao. Nahatonga fisalasalana ho an'ireo mponina amoron'ny rano ity seho ity satria mampanahy azy ireo ny ho avy, rahatrizay ka vita ny asa fanorenana ary tsy hisy intsony ny asa.
Afrika Mainty 28 Mey 2013
Nofaranan'ireo mpanao gazety tsy miankina Liberiana efa ho roa herinandro izay ny fandàvana ny hamoaka vaovao mikasika ny Filoha Ellen Johnson Sirleaf, fampanginana napetrak'izy ireo ho an'ilay mpitarika noho ny tsy nahavitàny nanameloka ny fanehoan-kevitry ny talen'ny fiarovana azy nanondro ny mpanao gazety ho "mpampihorohoro".
Nikaragoaiana Miaro Ny Lalàna Manohitra Ny Herisetra Atao Amin'ny Vehivavy
Amerika Latina 24 Mey 2013
Ny volana Aprily , natomboka tao amin'ny tambajotra sosialy ny fanentanana iray mitondra ny lohateny hoe "Manohana ny Lalàna 779 aho" mba hangatahana ny hanajàna ny "Lalàna Manontolo Hanoherana ny Herisetra atao amin'ny Vehivavy" manoloana ireo fanavaozana marobe naroson'ireo mpitarika fivavahana sy mpikambana ao amin'ny Ambaratonga ambony eo amin'ny Fitsarana (CSJ) .
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 23 Mey 2013